Baqattoota komishinarii olaanaa mootummoota gamtoomanii simatan ( Suuraa: Lizaabeet Paawulti)
Tokkummaa Mootummotaa keessatti Komishinara Olaanaa Kan waa’ee Baqattootaa kan ta’an Filippoo Graaandii moraa baqataa Ugaandaa keessaa daw’atanii jiru.Moraan baqataa Nyumaanzii jedhamu jalqaba akka saganteeffameetti baqattonni keessa qubatanii iddoo biraatti akka darbaniif kan yaadame ture.
Amma garuu baqattoota kuma hedduuf lafa jireenyaa ta’ee jira.Baqattoonni akka jedhanitti waan nyaatan ga’an hin jiru. Iddoo biraa deemanii qubachuuf immoo tajaajilli adda addaa hin jiru, akkasumas sodaa nageenyaa fi basaastotaa qabu.
Komishinarichi Graandiin akka jedhanitti rakkoo baqattoota Awuroopaatti kan birmate hawaasni addunyaa isa kanaafis birmachuu qaba.Baqataa Awuroopaa dhibba keessaa harka 60 hanga 70 gargaaraa isa Afrikaa keessaa dhibba irraa harka 20 hanga 30 gargaaruun sirrii miti, jedhan.
Gabaasaa Gutuu caqasaa.